8Yar (အိပ်ယာ): မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဓာတ်တော်များ ဖူးမျှော်ခွင့်သတင်း
သတင်းကောင်းလေးပါးပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဓာတ်တော်များဖူးခွင့်ရတုန်း စာဖတ်သူများကိုရော၊ ဘလော့ဂ်မောင်နှမတွေကိုပါ ဖူးစေချင်ပါလို့ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း (စင်္ကာပူ) အဖွဲ့ကလည်း ဓာတ်တော်များ စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် တရားစခန်းယောဂီများအတွက် ဝေယျာဝစ္စများကိုပါဝင် ကုသိုလ်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အောက်က Post လေးကို http://mettashinfoundationsg.blogspot.com ကကူးယူလာကြောင်းပါခင်ဗျာ။
(ဓမ္မကထိကဆရာတော်)မှ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ (၇)ရက် အထူးတရားစခန်းပွဲကို မေလ (၁)ရက်မှ (၇)ရက်နေ့ အထိကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်အသိပေး နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ထူးကဲလှစွာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်ကြွချီလာတော်မူသော ဓာတ်တော်ပူဇော်ပွဲ နှင့် (၇)ရက် တရားစခန်းပွဲတွင် ကျွန်တော်များ မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့မှ (၂)ရက် မေလ ၂၀၁၂တွင် အခြားဓမ္မအဖွဲ့များနှင့် စုပေါင်း၍ နေ့လည်ပိုင်း ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်အားလည်းကောင်း၊ (၄)ရက် မေလ ၂၀၁၂တွင် တရားစခန်းယောဂီများအတွက် တစ်နေ့တာ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်၊ ဓာတ်တော်များ တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ရေး ကုသိုလ် နှင့် လာရောက်ဖူးမျှော်ပူဇော်သူများအား အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး အစရှိသည့် လုပ်အားကုသိုလ် အစုစုတို့ကို ပါဝင်အားဖြည့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ညနေတရားပွဲများကိုလည်း မေလ (၁)ရက်၊ (၅)ရက် နှင့် (၆)ရက် တို့၏ ညနေ ၆:၃၀ မှ ၈:၀၀ အထိ Function Room 1, Arina Country Club, Joo Koon တွင် ကျင်းပပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မနီလာအောင် (၉၆၉၉ ၄၇၉၅)၊ လမ်းပြသူ (၆၃၃၆ ၅၉၄၉)၊ (nilaaung63@gmail.com)
Posted by 8Yar at 10:41 am
ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့အတွက် သာဓု သာဓု သာဓုပါကွယ်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ် ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဓာတ်တော်တွေကို အရောက်လာဖူးမယ် မောင်8Yar ရေ။
အော်. မိုးကုတ်ပြန်တုန်းက မင်္ဂလာတိုက်က ဘုန်းဘုန်းပြောတာ ဒီကိစ္စဖြစ်မယ်ထင်တယ်.. သတိမထားမိဘူး. အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ညီလေးရှင်ပြုကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ ဘုန်းဘုန်းကိုလဲ သေချာမမေးခဲ့မိဘူး. ဘာပဲပြောပြော စင်္ကာပူက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ကုသိုလ်ပွားရဦးမယ့် အခွင့်အရေးပေါ့ဗျာ.. သာဓု သာဓု သာဓုပါဗျာ..
kyaw myint said...